Akuko ọrụ US: Mgbake na -adịghị mma maka Ntụrụndụ na ile ọbịa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akwụkwọ akụkọ USA » Akuko ọrụ US: Mgbake na -adịghị mma maka Ntụrụndụ na ile ọbịa
Airlines • Airport • Akụkọ mkpakọrịta • Aviation • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Ụgbọ ala mgbazinye • Ịtụ egwu • culinary • Entertainment • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Nzukọ Mmekọrịta Akụkọ • News • ndị mmadụ • Rail njem • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Transportation • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
A ka nwere nnukwu mkpa maka Congress inye enyemaka enyemaka gọọmentị etiti na ihe mkpali iji kwado azụmaahịa na-adabere na njem ruo mgbe mgbake zuru oke ga-ejide-nke ga-achọ nloghachi njem azụmaahịa yana njem mbata nke mba ofesi.
Bureaulọ Ọrụ US nke Ndị Ọrụ Statistics ewepụtala akụkọ ọrụ na -akụda mmụọ.
Ngalaba ntụrụndụ na ile ọbịa nke United States hụrụ ọrụ ole na ole agbakwunyere na Septemba.
A na -ekwukarị ihe na -eruteghị ihe na -ebute ụdị nje dị iche iche nke metụtara njem na ngwụcha oge ọkọchị.
Njem US wepụtara nkwupụta na -esote taa na akụkọ ọrụ Septemba nke US Bureau of Labour Statistics wepụtara:
“Nyocha ọrụ taa na -arụtụ aka na mgbake na -enweghị isi maka mpaghara Ntụrụndụ na ile ọbịa nke dị oke mkpa, nke hụrụ ọrụ ole na ole agbakwunyere na Septemba (naanị 74,000) ma e jiri ya tụnyere ọnwa ndị mbụ ebe enwetara ọtụtụ narị puku ọrụ. Enweta uru ndị a na -adabaghị adaba na -ebute nje dị iche iche nke metụtara njem na ngwụcha oge ọkọchị.
"A ka nwere nnukwu mkpa maka Congress inye enyemaka enyemaka gọọmentị etiti na ihe mkpali ọzọ iji kwado azụmaahịa na-adabere na njem ruo mgbe mgbake zuru oke ga-ejide-nke ga-achọ nloghachi njem azụmaahịa yana njem mbata na mba ofesi."
Dabere na akụkọ ọrụ ọnwa Septemba, akụ na ụba US mepụtara ọrụ n'ụzọ dị nwayọ karịa ka a tụrụ anya na Septemba, akara enweghị atụ gbasara ọnọdụ akụ na ụba n'agbanyeghị agbanyeghị ngụkọta ya nke ukwuu site na mbelata nke ọrụ gọọmentị.
Nkwụ ụgwọ ndị na -abụghị nonfirim bilitere site na 194,000 n'ọnwa, ma e jiri ya tụnyere atụmatụ Dow Jones nke 500,000, Ngalaba Na-ahụ Maka Ọrụ kọrọ.
N'agbanyeghi ọrụ niile adịghị ike, ụgwọ ọnwa abawanyere nke ukwuu. Uru kwa ọnwa nke 0.6% kpaliri ịrị elu afọ ruo 4.6% ka ụlọ ọrụ na-eji mmụba ụgwọ ọrụ iji lụso ụkọ ọrụ na-aga n'ihu. Ndị ọrụ dị ugbu a belatara site na 183,000 na Septemba ma bụrụ nde 3.1 ihere ebe ọ nọ na Febụwarị 2020, obere oge tupu ekwuputa ọrịa ahụ.
Nkwupụta a na -abịa n'oge dị oke mkpa maka akụ na ụba, yana data na -adịbeghị anya na -egosi mmefu siri ike nke ndị ahịa n'agbanyeghị ọnụ ahịa na -arị elu, mmụba na ngalaba nrụpụta na ọrụ yana oke ọnụ ahịa ụlọ.